ခရိုအေးရှား ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သြစတြီးယား ဆက်လက်ဖမ်းဆီး | Ko Oo + Ma Thandar
« အာဆင်နယ် ချယ်လ်ဆီး ၃ ဂိုး ၁ ဂိုး
လက်ရှိသမ္မတကို သပိတ်မှောက်ရေး အိုင်ဗရီကို့စ် လုပ်သားအများစု စိတ်မ၀င်စား »
ခရိုအေးရှား ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း အီဗို ဆာနားဒါး။ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၉ – AP
This entry was posted on December 27, 2010 at 3:06 pm and is filed under ဖြန့်ဝေခြင်း, နိုင်ငံတကာရေးရာ, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.